Takatanga kukiritsana namainini ndokubva ndaisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee! - Masasi eHarare
DzeBonde Takatanga kukiritsana namainini ndokubva ndaisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee!
Takatanga kukiritsana namainini ndokubva ndaisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee!
Takatanga kukiritsana namainini ndokubva ndaisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee! Ndakasvika pamba makuseni ndichibva kubasa sezvo ndaishanda night shift ndiri gaurd) papurazi. Pandakasvika pamba ndakangosvikopinda mumba ndisina kugogodza ndiye dhuma dhuma namainini varipa chemba dziya dzekucheka zvigubhu, ndinoziva pavanhu varikuverenga hapashaike anechemba yechigubhu. Mainini vakavhunduka ndo kumhanya kunopfeka asi ndanga ndatoona kare ndakangoti ndichakukwira chete.
Ndakazopinda mubedroom mangu mainini vakabva vabuda vachinorara muimba yekutandarira sezvo taigara mu two rooms, saka mainini vairara pasofa kana ndiripo kana ndisipo ndopavairara nasisi vavo. Ndakagaya kuti mainini ndivakwire since ndaiziva kuti mainini vaiva mhandara saka ainge atori makata asi nechemumoyo ndakangoti ndomukwira chete. Magaro racho kukura kwacho iwe masasi eharare, paanofamba achizunza kunge munhu arikutamba chimutare ndofana kurifila kunyangwe ndaimboribata hangu dako rake patinenge tichitamba chiramu asi ndaisa tamba naye Rudo paainge aripo. Rudo ndiye mukadzi wangu panguva iyi aiva nenhumbu yanga yatova pedyo kubarwa. Rudo aitonakidzwa kundiona ndichitamba chikudo namainini aiti akaona zvanyanyisa waimunzwa woti mumwe akuda kuzochema manje ndaibva ndaona kuti maimwana havana kufarira kamutambiro katinenge takuita nemuni’ina wavo.
Rimwe zuva ndakabva kubasa ndokuona mainini vakara pasofa kachemba kavo kari kuseri kwe door zvekuti kakapotsa karasika. Ndakabva ndananga pana mainini ndokusvikobata mazamu, ndaiziva kuti havambopopota nekuti vaitya sisi wavo. Ndakabva ndasiya ndavarova magaro, iwayo akaimbwa na jacob moyana kuti munotidako. Mainini vakangoti bamukuru makudenhaka kuseni seni kuno, ini handina kudaira ndakapinda mubedroom ndokuona Rudo akarara zvake asina kusimira angori nekabhurugwa chete, ipapo zimboro rangu rakabva ramira ndakabva ndati nhasi dakusvotesa mainini. Ndaida kuti vanzwe ndichisvira sisi vavo ndaiziva kuti akanzwa ndichisvira sisi vake iye aizobatwa nenyere chete, saka ndanga ndatoteya. Ndakamutsa Rudo ndokutanga kumuromancer ndakaona akuita kunge achaita faint neromance apo ndaitoyamwa hangu mazamu.
Ma Types eMHECHE Dzakasiyana Siyana…